Waa maxay farqiga u dhexeeya koofiyadda baaskiilka iyo koofiyad bir ah qalfoof? - Jomo Technology Co., Ltd
Waa maxay farqiga u dhexeeya koofiyadda baaskiilka iyo koofiyad bir ah qalfoof?
Su'aal A caadi ah oo dadku is waydiiyaan waa, "Waa maxay farqiga u dhexeeya koofiyadda baaskiilka iyo koofiyad bir ah qalfoof?" Marka laga soo tago faraqa u cad in looks, baaskiil iyo qalfoof koofiyado bir ah run ahaantii waa qoral kala duwan siyaabo dhowr ah, oo aad jeclaan lahayd si aad u hubiso haddii aad iibsato nooca saxda ah ee koofiyad for fuushan aad lagu skeidgareeyo korontada .
Waad arki kartaa farqiga u dhexeeya caymiska koofiyadda baaskiilka oo joogto ah iyo mid loogu talagalay in lagu ilaaliyo xagga dambe ee madaxa aad. credit Image: Sweethome The
Mid ka mid ah farqiga weyn ee koofiyadaha adag ee baaskiillada iyo koofiyado qalfoof u dhexeeya waa dhab la xiriira naqshadooda kala duwan. koofiyadaha qalfoof, kaas oo dhaqan ahaan waxaa ku wareegsan oo siman, daboolo xagga dambe ee madaxa aad. Tani waa sababta ay waxaa loogu talagalay in looga hortago inuu dhaco in skateboarders caadi ahaan qaadan, halkaas oo ay dhul laga yaabaa xagga dambe ee madaxa. Taas bedelkeeda, rookaha dhif dhici of dambe ee baaskiilada ay.
Wixii ah skateboarder korontada , waxaan soo jeedinayaa in helitaanka koofiyad daboolaya xagga dambe ee madaxa sida koofiyadda qalfoof dhaqanka sameeya. Maxaa yeelay, aad guddiga uu awood u leeyahay in si deg deg ah loo dardar, oo lagugu tuuro ayaa laga yaabaa off iyo gadaal haddii aad quudhsatay immisa ceejinta aad codsanayso.
Farqiga kale wayn ee ka dhexeeya koofiyadda qalfoof caadiga ah iyo koofiyadda baaskiilka waa awooda si looga hortago noocyada kala duwan ee saameynta. Dhaqanka, non-certified, koofiyado qalfoof waxaa loogu talagalay la qolof ah ka jilicsanaayeen xumbo ka ilaaliya saamayn yar oo badan. Taas bedelkeeda, koofiyadda baaskiilka la sameeyey ka soo xumbo adag EPS in waxaa loogu talagalay in ay qaataan mid ka mid saameyn weyn iyo jebin, ka dib markii taas oo aad u baahan tahay si ay ugu bedesho koofiyada.
In kastoo koofiyadaha qalfoof dhaqanka, loogu talagalay rullebrett caadiga ah iyo longboards Electric , waxaa inta badan ma shahaado, waa inaad heshaa koofiyad qalfoof isticmaala xumbo isla EPS adag koofiyadda baaskiilka uu leeyahay, in weli ilaaliya dambe ee madaxa kuu ah. Waxaad si fudud u sheegi karaan oo koofiyado qalfoof waxaa loogu talagalay sidaas adigoo hubinaya inay CPSC Shahaado.
Maxaa koofiyad waa in aan soo iibsan?
All of koofiyadaha ayaan ku qoran ayaan ku guide koofiyad waa CPSC certified oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo xagga dambe ee madaxa aad. Inta aad loo hubiyo in aad leedahay koofiyad xaqiijiyey in sidoo kale ilaaliya dambe ee madaxa, waxaad noqon doontaa wax badan ammaan on your skateboar korontada d.
waqti Post: Dec-11-2017